“श्री’मान टाढा हुदा म’हिलाले यस्तो ह’र्कद” गरिन्, वा’स्तविकता खु’ल्दा प्रहरी नै च’कित” – Life Nepali
“श्री’मान टाढा हुदा म’हिलाले यस्तो ह’र्कद” गरिन्, वा’स्तविकता खु’ल्दा प्रहरी नै च’कित”
एजेन्सी। धनाढ्य घरकी भारतीय एक महिलाले आफ्ना श्रीमानबाट छु’टकारा पाउनको सबैलाई च’कित पार्ने का’ण्ड घ’टाएकी छन् । उनले यस्तो का’ण्ड गरिन् कि वास्तवि कता खु ल्दा अनुसन्धा न गरिरहेका प्रहरी नै दं’ग परे । भारतीय मिडिया आज तकको समाचारअनुसार राजधानी दिल्लीकी यी महिलाले आफ्नै आ’त्मह’त्याको झु’टो कहानी रचेकी थिइन्, जसको खु’लासा गत मंगलबार भएको थियो ।
यी महिलाले उत्तर प्रदेशको गाजियाबादस्थित हिडन ब्यारेज नजिकै लगेर आफ्नो कार राखिन्, कारमा सु’साइड नोट राखेर फ’रार भइन् । पछि उनी बैंग लोरमा भेटिइन् । आ’त्मह’त्याको झु’टो कहानी रच्ने कोमल तालान नामकी यी महिलाले गाजि याबादको नहरको पुलमा आफ्नो गाडी राखिन् । त्यसपछि उनले नहरमा हा’म्फा’लेर आ’त्मह’त्या गरेको खबर फैलियो । ३ दिनदेखि गोताखोरले नहरमा ला’श खोजिरहेका थिए तर ला’श भेटिएको थिएन ।
कोमलले कारमा सु’साइट नोट पनि छा डेकी थिइन् ज समा उनले आफूले आ’त्मह’त्या गर्न लागेको लेखेकी थिइन् । कोमलले यो सब गर्नुको पछाडि उनी श्रीमानदेखि है’रान भएको पाइएको छ । उनले आ’त्मह’त्याको झु’टो क’हानी रचेर श्री मानलाई कानूनी रुपमा फ’साउँन चाहेकी थिइन् । शनिबार बिहान ११ बजे पुलिसले पुल बाट बे’वा रिसे अवस्था मा स्का र्पियो कार बरामद गरेको थियो ।
स्कार्पियोमा सु’साइ ड नो ट थियो, जसमा कोमल तालानको नाम उल्लेख थियो । उनका पिता अनिल तालान भारतीय किसान युनियनका के न्द्रीय सचिव हुन् । उनीहरुको परिवार ग्रेटर नोएडामा बस्छन् । अनिल तालानले पनि छोरी लाई परि वारमा त’नाव दिइएको आ’रोप लगाएका थिए । तर, कोमल भागेर बैं गलोर पुगेको अवस्थामा भेटिएपछि उनलाई दिल्ली ल्याएर का’र वाही अगाडि बढाइएको छ ।
Previous यौ’न स’म्बन्ध रा’ख्न नमा’नेपछि प’त्नीले लो’ग्नेको गो’प्य अं:ग नै का;टेप’छी !
Next कपडा भि’त्रको दृश्य समेत खिच्नसक्ने क्यामरा ! यति पर्छ यसको मूल्य – ( हेर्नुहोस )